Blockchain News 8 Janoary 2018 - Blockchain News
Janoary 8, 2018 Admin
Blockchain News 8 Janoary 2018
Ron Paul ara-dalàna Bitcoin
Repoblikana kaongresy teo aloha Ron Nilaza i Paoly izy rehetra ho bitcoin hafa toy ny vola, raha mbola ny zava-drehetra momba ny mampiady hevitra, virtoaly-pananana ara-dalàna.
Ny teo aloha avy any Texas Solombavam-Republican vao haingana CNN nampahatsiahy fa rehefa mby tao an Kaongresy, dia nampiditra lalàna mba hamela mifaninana vola satria dia mankahala ny rafitra ankehitriny.
"Fahavetavetana eo anatrehako ny rafitra izay ananantsika. Ny counterfeiters ofisialy any amin'ny Federal Reserve. Izany no lehibe misstep sy olana lehibe. Noho izany ny olona dia tokony hanana ny zo hifidy,"Insider hoy ny Newsmax.
"Dia nataon'ny olona tany am-boalohany, rehefa nanomboka ny vola. Dia naka volamena sy volafotsy. Ary ny governemanta naka ny ka nanao ditra fa ny fitsipika sy ny ampihimamba izany. Ary nandrava izany eto amin'ity firenena ity,"Hoy i Paoly.
"Te-ara-dalàna rehetra ireo safidy sy izay olona atao ny mampiasa toy ny vola. Fa tsy misy hosoka. Tsy afaka ny hanao hosoka,"Ny Texas Libertarian CNN nilaza ny Michael Smerconish.
Ron Paul dia mpitsabo, mpanoratra, ary ny teo aloha Repoblikana kaongresy. Paoly koa dia roa-fotoana kandidà ho filoham-Repoblikana, ary ny filoham-pirenena atolotra ny Libertarian Party ao amin'ny 1988 U.S. fifidianana filoham-pirenena.
ViaBTC fanakatonana ny tsena ho an'ny harena ankibon'ny tany fifanarahana
Bitcoin Shinoa fitrandrahana dobo ViaBTC dia nanambara fa ho hanakatona ny tsena ho an'ny harena ankibon'ny tany fifanarahana tamin'ity herinandro ity, fihetsika izay azo tao anatin'ny tatitra vaovao ny fandrarana ny manam-pahefana ao amin'ny firenena.
Tao amin'ny Jan. 8 fanambarana, ViaBTC nilaza fa mety hanakatona ny tsena - alalan 'izany dia afaka mividy fifanarahana mpampiasa entitling azy ireo ny sasany hashing habetsaky ny hery (ary ny mifandray cryptocurrency payouts) - dia Jan. 10. Ny antony: ny orinasa te- “sahoan-dresaka-maso sy hiaro ny tombontsoan'ny ny mpamatsy vola.”
“Mba hamitana ny harena ankibon'ny tany rehetra rahona fifanarahana varotra ASAP. Misaotra anareo rehetra noho ny fanohanana,” ViaBTC nanampy.
ViaBTC voalohany nanomboka ny rahona fitrandrahana fanompoana tamin'ny Novambra 2016.
Ny fanakatonana tonga volana taorian'ny ViaBTC nakatona ny cryptocurrency fifanakalozana ho setrin'ny ny famoretana ny manampahefana Shinoa ao amin'ny firenena fifanakalozana tontolo iainana, dingana iray izay vao nanomboka taorian'ny am-piandohan'ny 2016. Ny manam-pahefana ihany koa ny nifindra tany mandrara ny fampiasana ny vola madinika voalohany fanatitra (ICOs) tamin'ny Septambra.
Na izany aza raha tsy misy voalaza mazava fa ny zava-nitranga roa, dia mifandraika, ny fanambarana manaraka vaovao farany tatitra fa manam-pahefana ao Shina no mitady ny fanakatonana tsikelikely ny asa fitrandrahana harena ankibon'ny tany an-trano bitcoin.
Araka ny antontan-taratasy niely nandritra ny faran'ny herinandro, ary heverina ny tari-dalan'ny Internet Financial Group ny loza mety hitranga Remediation, Shinoa iray regulator, manam-pahefana te-hampihenana fanohanana ho an'ny mpitrandraka eo an-toerana, miantso ny fepetra manodidina ny hery sy ny fampiasana ny tany. Ny iray amin'ireo antontan-taratasy fa ny manam-pahefana nangataka manomana drafitra ho an'ny dingana toy izany ny faha-10.
Nisy solontena avy ao amin'ny sampan-draharaha ny biraon'ny Xinjiang nanamafy ny tahirin-kevitra ny fahamarinan'ilay ny Quartz fa nandà ny hevitra bebe kokoa.
Araka ny sary koa ny Bloomberg, mpitrandraka ao Shina dia miovaova ny dian-tongotra lavitra ny firenena, , hitily toerana vaovao any Eoropa sy Amerika Avaratra. Ny asa fanompoana vaovao nitatitra fa manam-pahefana ao Shina te mahazo miaro ny “tia filaminana” fanakatonana ny harena ankibon'ny tany tontolo iainana.
Ford raki-daza cryptocurrency patanty
Ny fiara goavam-be ...
Popularity cryptocur ...
Previous Post:About ICO: Iza no nanangona vola indrindra nandritra famantarana varotra
Next Post:Telegrama ICO drafitra
Crypto News 22.10.2018
Aogositra 21, 2018 Admin
TradeFred dia eran-tserasera sy CFD forex varotra sehatra. ny manam-pahaizana
Inona no atao hoe Unboxed Network? Unboxed – Market Brands goavana no mandany
altcoins bitcoin andian-tsoratra rojo BTC rahona fitrandrahana mpiara heverina vola madinika Coinbase crypto cryptocurrencies cryptocurrency ethereum fifanakalozana hardfork ico litecoin Ma mpitrandraka fitrandrahana Network vaovao vaovao sehatra fifanarahana ripple nanaraka telegrama famantarana famantarana varotra kitapom-batsy